Motivation for success :: ओलीले झापा आन्दोलनका सबैलाई डण्डा चलाए
ओलीले झापा आन्दोलनका सबैलाई डण्डा चलाए
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, मंसिर १७ २०७८
नेकपा (एमाले) को दशौँ महाधिवेशन हिजो मंगलबार चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले कम्युनिष्ट संस्कृतिका मान्यतालाई कति पक्डियो, कति छोड्यो र कसरी नेतृत्व निर्माण ग¥यो भन्ने कुरा स्मरणीय छ ।
इतिहास, आवश्यकता, भूमिका र कार्यक्षमताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा रहन्छन् । उदाहरणका लागि ७० वर्षको मान्छे जिल्ला कमिटीमै रहेको हुनसक्छ, तर ३५ वर्षको मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा पुग्न पनि सक्छ । यस्ता कुरालाई व्यवस्थापनका निम्ति पार्टीका विधि, विधान र मान्यताहरूले निर्देशित गरेको हुन्छ ।
केन्द्रीय सदस्यको संख्या कति राख्ने ? कुन योग्यताको व्यक्ति केन्द्रमा पुग्ने ? कुन तह, जाति, वर्ग, समुदायका व्यक्तिहरूलाई कति–कति संख्याका दरले कमिटीमा व्यवस्थापन गर्ने ? यी कुराहरू व्यक्तिको चयनपूर्व अध्ययन गरिन्छ । त्यही प्रयोजनका लागि पार्टीले असोजमा गोदावरी विधान सम्मेलनबाट आयोजना केही विधि निर्धारित ग¥यो । हामीले विश्वास ग¥यौँ, अब विधिकै अधीनमा नेतृत्व बन्छ ।
गोदावरी सम्मेलनमा उठेको महŒवपूर्ण विषय हो, महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व दिने, २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने । त्यसो गरिँदा केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १५–१६ महिलासहित थुप्रै कमरेडले बिदा हुनुपर्छ । यतिबेला हामी पार्टी विभाजनको अवस्थाका कारण संकटमा छौँ ।
यो संकटमा व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण कमिटीको संख्याका नाममा खुम्चिएर नबसौँ भन्दै अध्यक्ष क.केपी ओलीले संख्या थप्ने विषय उठाउनुभएपछि हामीले मान्यौँ, यसरी ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेभयो ।
यिनै पृष्ठभूमि र परिस्थितिबीच अध्यक्षले ११ गते राति केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटा सूची पेश गर्नुभयो । हामीलाई लागेको थियो, नेतृत्वलाई सर्वसम्मत विधिबाट चयन गर्ने हो भने कम्तिमा सरसल्लाह हुन्छ । पर्ने र पर्न नसक्ने साथीहरूसँग सोधिन्छ, खोजिन्छ । तर, यस्तो केही भएन । एकाएक बन्दसत्रको हलभित्र अध्यक्षले नाम पढ्नुभयो ।
हामीले गोदावरी विधान सम्मेलनबाट पारित गरेको नीति थियो, केन्द्रीय सदस्यका हकमा पुरुष भए कम्तिमा १० वर्ष र महिला भए कम्तिमा ७ वर्ष संगठित सदस्य भएको हुनुपर्ने । तर, त्यहाँ २०७४ सालको निर्वाचनअघि राप्रपा परित्याग गरेर आउनुभएकी कोमल वलीको नाम वाचन गरियो । योग्यता पुग्गेका, आवश्यकता र उपयोगिता बाँकी रहेका अरु थुप्रै कमरेडको नामै सुनिएन ।
केन्द्रीय सदस्यभित्र म स्वयं अटाइनँ । म २०२८ को झापा विद्रोहबाट यो आन्दोलनमा जोडिएको व्यक्ति । अध्यक्ष कमरेडभन्दा केही वर्ष बढी जेल बिताएको र नख्खु जेलब्रेकको एउटा पात्र हुँ । यसो भनेर म केन्द्रीय कमिटीमा रहनैपर्छ भन्ने होइन । मजस्ता थुप्रै साथीहरू केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । सबै जना सधैं कमिटीमा नपर्न सकिन्छ ।
तर नेतृत्वले भन्नुपर्छ, यति–यति कारणले तपाईं नपर्ने हुनुभयो । मनासिव कारण भनिएको भए मैले मान्नुपथ्र्यो, नमान्दा मसँग असहमति राख्ने अधिकार हुन्छ । तर, न सोधखोज, न सरसल्लाह, न त कुनै संकेत नै † व्यक्तिलाई मन परे मापदण्ड मिचेर केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ, व्यक्तिलाई मन नपरे कसैको इतिहास, भूमिका र योगदानसँग खेलबाड गरेर जतिबेला पनि अपमानित गर्ने काम भएको छ ।
हो, पार्टी विभाजनपूर्व, मेरी श्रीमती पवित्रा निरौला खरेलसहित हामी माधव नेपाल समूहसँग नजिक थियौँ । क.केपी ओलीका कार्यशैलीसँग हाम्रो अहसमति थियो । तर, जब माधव कमरेडहरू पार्टी विभाजनको तहमा जाने हुनुभयो, हामीले त्यसो नगरौँ भन्यौँ । उहाँहरूले मान्नुभएन । फलस्वरुप झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहनुभएकी पवित्रा र म माधव कमरेडहरूको साथ रहेनौँ ।
हामीजस्ता अरु थुप्रै साथीले पार्टी विभाजनलाई स्वीकारेनौँ, एमालेमै रह्यौँ । हामी दुबै र हामीजस्ता अरु साथीहरू पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थियौँ । यसचोटि सर्वसम्मत केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्दा भइरहेका केन्द्रीय कमरेडहरू त्यसमा छुट्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ २ सय २५ सदस्यीय कमिटीलाई बढाएर ३ सय १ बनाइएको थियो ।
तर, हामी छुट्यौँ । किन छुट्यौँ ? हाम्रो अयोग्यता के थियो ? हिजो किन केन्द्रीय कमिटीमा राखियो र आज किन हटाइयो ? यी विषयमा न कतै छलफल भयो, न त प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्दसत्र हो । तर, नेतृत्व चयनमा सूची वाचनको शैली अपनाइएपछि सवाल–जवाफको चरण अन्त्य भयो ।
‘सर्वसम्मत’ का नाममा भएको अन्यायलाई अस्वीकार गर्नुभएका साथीहरूले विद्रोह गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो । उहाँहरूलाई धेरै अपमान गरियो । अपमान सहेर पनि जनवादी अभ्यासमा पराजित हुने अधिकार सुरक्षित राख्दै साथीहरू निर्वाचनमा जानुभयो, हार्नुभयो । त्यो जित र हार थिएन, विद्रोह थियो । त्यसमा म र मजस्ता अरु थुप्रै साथीको समर्थन रह्यो ।
झापा आन्दोलनका थुप्रै साथीहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ । मनकुमार गौतम, मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली, आरके मैनाली, सीता खड्का, घनेन्द्र बस्नेत, गौरा प्रसाईं, नारद वाग्ले, मानकुमार तामाङ, सानो र ठूलो दुर्गा अधिकारी, कृष्ण सेढाईं, दधिराम उप्रेती हुनुहुन्छ । यसमध्ये कतिपय कमरेडहरू विभिन्न कम्युनिष्ट घटकमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
कम्तिमा झापा आन्दोलनदेखि आजसम्म साथमा रहेका साथीहरूसँग केपीले एक बचन सोध्नुपथ्र्यो । उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा नराख्ने मन थियो भने पनि राख्दिनँ भन्नुपथ्र्यो । तर, अपमानबोध हुने गरी हामी र हामीजस्ता अरु थुप्रै साथीहरू केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिएका छौँ ।
यो कम्युनिष्ट पार्टीको अभ्यासभन्दा निकै परको परिस्थिति हो । जनवादको न्युनता र केन्द्रीयताको अधिकता यसमा प्रष्टसँग देखिएको छ । पार्टीमा देखिने गरी व्यक्तिवाद हावी भएको छ ।
मोटिभेट न्यूज डटकम सकारात्मक पत्रकारिताको प्राय हो । नेपालमा सकारात्मक पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने पहिलो तथा एक मात्र सञ्चार माध्यम हो मोटिभेट न्यूज । सकारात्मक पत्रकारिता मार्फत समाज रूपान्तरणका लागि लागिरहेको यो मिडिया वि.स. २०७२ साल जेठदेखि सञ्चालनमा छ ।
प्रेरक प्रसंग : हात्तीलाई राजा बन्ने अबसर
प्रेरक प्रसंग : रेलमा दुईटीसँग !
राज कार्की ‘राष्ट्रिय युवा उद्यमी सम्मान’ द्वारा सम्मानित
भावनाको कृषि क्रान्ति, धानखेती छाडेर ड्रागन फ्रुटदेखि माछापालन सम्म
नेपाली विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो : दवाडी
जसलाई बैंकको जागिर भन्दा कालिज प्यारो लाग्यो
एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनलाई पत्तासाप पार्दै पुष्प बादीले रचे इतिहास
यस्तो रहेछ विश्वराजलाई उछिनेर आईजीपी बनेका धिरजप्रताप सिंहको सफलताको कथा
१० रूपैयाँको माछा बेच्थे, अर्बौँको मालिक भए
६० वर्षमा पनि घटेन सीताको जोश
को हुन् महामन्त्रीमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्मा, यस्तो छ उनको सफलताको कथा
एसपीपी स्वीकार नगर्ने
देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित
भाइरल भयो एमाले सांसदको बेड सिन (भिडियोसहित)
सरकारको काम कारबाही प्रति पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण जरुरी
कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि निर्विरोध निर्वाचित भईन् रश्मी
खतरनाक प्लानसहित आएको रहेछ अमेरिकी जहाज, बल्ल खुल्यो रहस्य
यस्तो पो रहेछ गभर्नर अधिकारी निलम्बन हुनुको भित्री कारण, बल्ल बाहिरियो ६ अर्ब ५० करोडको काण्ड
एमालेले टुङ्गो लगायो मेयरको उम्मेदवार !
रुसीको आक्रमणबाट ढल्यो अमेरिकाको मेरुदण्ड
सम्पादक : पदमबहादुर महतारा
सहसम्पादक : शाहास भट्ट
सहसम्पादक : बिमला लामिछाने